काठमाडौं । कार्तिक १५ गते बस्ने भनिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटी बैठक एक महिना सरेको छ । अब वैठक मङ्सिर १५ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौंमा बस्ने नेकपाले बताएको छ । कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणलाई ध्यान दिँदै वैठक सारिएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सचिव श्रीराम ढकाल र ईश्वरी रिजालले विज्ञप्ति
काठमाडौं । पार्टी भित्र र बाहिरबाट चौतर्फी विरोध भएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सांसद तथा पदाधिकारीलाई वितरण गर्ने दसैँ भत्ता नलिने भएको छ । कोरोना महामारीको चरम संकटमा दसैं भत्ता लिँदा सर्वत्र विरोध भएपछि नेकपा संसदीय दलले भत्ता नलिने निर्णय गरेको हो । यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त तीन जना मन्त्रीलाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराउनु भएको छ । बिहीबार दिउँसो शीतल निवासमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नव नियुक्तमन्त्रीहरूलाई सपथ खुवाइएको हो । बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन जना मन्त्री थप गर्नुका साथै केहीको जिम्मेवारी
काठमाडौं । सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूको अडानले गर्दा प्रदेश नम्बर पाँचले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन अढाइ वर्षपछि लागेका छ । मंगलबार प्रदेशसभामा मतदान मार्फत प्रदेश ५ को राजधानी दाङको भालुवाङ र प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा
कांग्रेस सांसदले गरे प्रदेश ५ को प्रदेशसभा बैठकमा तोडफोड
काठमाडौं । प्रदेश ५ को प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले तोडफोड गरेका छन् । प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको प्रस्तावमा छलफल सुरु भएपछि उनीहरुले नाराबाजी गरेका थिए । सभामुखले नेपाली कांग्रेसका सांसदको विरोधका बीच प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरेपछि उनीहरू आक्रोसित हुँदै प्रदेशसभाभित्रका
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक असोज १९ गते
काठमाडौं । १४ अधिवेशनको तयारीबारे छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक असोज १९ गते बस्ने भएको छ। बैठकमा पार्टीको आगामी १४ औं महाधिवेशनको तयारीबारे छलफल हुने कांग्रेसले जनाएको छ । साथै बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा सहभागिता
अंगीकृत नागरिकताका लागि सात वर्षे प्रावधान नमान्ने कांग्रेसको निर्णय
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नेपालीसँग विवाह गरी आएकी विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले यो प्रस्ताव संविधान विपरित भएको निष्कर्ष निकालेको हो। संसदको राज्य
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा देखिनेगरी निशान छाप परिवर्तन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिमा पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभाबाट जेठ ३१ गते पारित भएको थियो । नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक पारित गरियोस् भनी राखिएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात्
कोरोनारोकथाममा सचेत बन्न सरकारलाई कांग्रेसको ध्यानाकर्षकण
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकार कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाममा चुकेको भन्दै सचेत बन्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। मंगलबार प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडको नेतृत्वमा सांसदहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। ध्यानाकर्ष
कांग्रेसले भन्यो,‘जेठ २५ भित्र कर तिनुपर्ने आदेशको भद्र अवज्ञा विकल्प छैन’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले जेठ २५ भित्र कर दाखिला गर्नुपर्ने सरकारी आदेशको भ्रद अवज्ञा गर्न व्यवसायीलाई अनुरोध गरेको छ । बुधबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै लकडाउन गरेर कर तिर भन्नु व्यवहारिक नभएको भन्दै त्यसको अवज्ञा गर्नुपर्ने बताएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५
लकडाउनको अवधि जेठ २० गतेसम्म बढाइयो
काठमाडौं । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जारी लकडाउन थप १५ थपेर जेठ २० गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । यस अघि बसेको कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समितिको बैठकले लकडाउन १५ दिन थप गर्न सरकारलाई
काठमाडौँ । बुधबार बिहान ११ बजे बोलाइएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक स्थगति भएको छ । कोरोना संक्रमण बढेसँगै सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बैठक स्थगन भएको बताइएको छ । यसअघि वैशाख २५ गतेका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक पनि अघिल्लो दिन स्थगित गरिएको थियो । पार्टीका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा
सीमा विवाद सल्टाउन कुटनीतिक पहलकदमी जरूरी,विज्ञप्ति निकालेर मात्र समस्या समाधान हुँदैनःकांग्रेस
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लिपुलेकमा भारतले गरेको सडक विस्तारबारे वक्तव्य निकालेर मात्र नपुग्ने भन्दै सरकारले कुटनैतिक ढंगले दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । आइतबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसले कुटनीतिक र राजनीतिक रुपमा उच्च स्तरीय
प्रेस स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको जगःकांग्रेस सभापति देउवा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रेस स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको जग भएकाले कहिकतैबाट प्रेसलाई नियन्त्रण गरिनु नहुने बताएका छन् । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा पत्रकार तथा मिडियाकर्मीप्रति शुभकामना व्यक्त गर्दै सभापति देउवाले यस्तो बताएका हुन्
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले वैशाख २५ गते स्थायी समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले स्थायी समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। २४ गते बस्ने सचिवालय बैठकले पार्टीको वर्तमान अवस्था र
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताबीच सोमबार भएको छलफलमा सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने सहमति भएको छ ।शीर्ष नेताबीच छुट्टाछुट्टै छलफलमा सहमति जुटेपछि सचिवालय बैठक बस्न लागेको हो । सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालका अनुसार सोमबार शीर्ष नेताहरूको बीचमा भएको छलफलबमोजिम सचिवालय र
काठमाडौं । लकडाउनका कारण समस्यामा परेका अति विपन्न ४३ परिवारलाई नेपाल विद्यार्थी संघका नेता रघुवीर कार्कीको पहलमा राहत वितरण गरिएको छ । तराईका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएर जुत्ता सिलाएर गुजारा गर्ने विपन्न परिवारलाई नेता कार्कीले एक बोरा चामल, ५ केजी दाल, तेल, नुन लगायतका खाद्य सामग्री प्रदान गरिएको
काठमाडौं । नवगठित जनता समाजवादी पार्टीले पार्टीले एकीकरणको सहमतिपत्र औपचारिक रुपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको छ । एकीकृत पार्टीका नेताहरुले आज निर्वाचन आयोग पुगी दल दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दुई पार्टीबीच एकीकरण हुने सहमति भएको जानकारी आयोगलाई प्राप्त
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले अध्यादेश फिर्ता नगरे आन्दोलनमा सुरू गर्ने निर्णय गरेका छन् । बुधबार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको चार दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारले ल्याएको अध्यादेशले संविधानमाथि प्रहार गरेको र
अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलबीच साझा धारणा बनाउन कांग्रेसले डाक्यो बैठक
काठमाडौं । सरकारले सोमबार जारी गरेको अध्यादेशको विषयमा साझा धारणा बनाउन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले छलफल गर्ने भएको छ । सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धि अध्यादेशको विषयमा साझा धारणा बनाउन कांग्रेसले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरूसँग छलफल गर्न
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीलाई समेत थाह नदिइ अध्यादेश मार्फत दल विभाजन सम्वन्धी कानुन संशोधन गरेपछि सर्वत्र सरकारको आलोचना सुरु भएको छ । दुई तिहाईको ऐतिहासिक सरकारले कोरोना भाइरसको सक्रमणसँग भिड्नुपर्ने बेला पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि प्रतिपक्षी नेपाली
गीता हातमा राखेर कसम खान्छु,राप्रपालाई फुट्न दिन्नःकमल थापा
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो पार्टी कहिले नफुटने दाबी गरेका छन् । पार्टी एकीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले ‘गीताको कसम खादै पार्टी फुट्न नदिने उद्घोष गरे’ । काठमाडौंको राष्ट्रियसभा गृहमा बुधबार राप्रपा र राप्रपा संयुक्तको एकता घोषणासभामा
प्रस्तावित राजदूत पाण्डेविरूद्ध उजुरी आह्वान
काठमाडाैं । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे को संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले पाण्डेविरुद्ध उजुरी दिन सरकारी सञ्चार माध्यममा १० दिने सूचना निकाल्न निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले
राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन पार्टीले निर्णय गर्ने विषय होईनः डा. भट्टराई
काठमाडौं, १६ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले राष्ट्रियसभामा एक जनाको नाम मनोनयनको विषय पार्टी आफैंले निर्णय गर्ने विषय नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘अहिले राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि वामदेव कमरेडको नामको प्रस्ताव आयो । यो विषय पार्टी आँफैंले
पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कर्मचारीलाई प्रयोग गरेको भाषाप्रति कांग्रेसको आपत्ति
काठमाडौं । पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद सम्बन्धमा स्थानीय प्रतिनिधिसँग कमिशनका लागि कुरा गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुलाई प्रयोग गरेको भाषा प्रति नेपाली कांग्रेसले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘नेपाल सरकारको मन्त्री
‘एमसिसी नेपालको हितमा’
रुपन्देही । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) आयोजना नेपालको हितमा रहेको बताउनुभएको छ । राप्रपा प्रदेश ५ ले मंगलबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा अध्यक्ष थापाले एमसिसीको देशको हितमा रहेपनि नागरिकमा अनेक आशङ्का पैदा भएकाले सरकारले
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्वाहाङ्फेलाई आज पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा अपराह्न आयोजित समारोहमा राष्ट्रपतिबाट नवनियुक्त मन्त्री तुम्वाहाङ्फेले शपथ लिनुभएको हो । नेपालको संविधानबमोजिम
दार्चुला, फागुन ४ गते । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रको भ्रमण गर्ने हुनुभएको छ । दार्चुला उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा आजदेखि १३ गतेसम्म सञ्चालन हुन गइरहेको महोत्सवको उद्घाटन कार्यक्रमपछि उहाँले कालापानी क्षेत्रको भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको हो । उहाँ नेपाली सेनाको
वाग्मती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा फुयाँल
हेटौँडा । वाग्मती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा रामेश्वर फुयाँल नियुक्त भएका छन् । मंगलबार मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले उनलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । मन्त्री फुयाँलले बेलुकी ४.०० बजे शपथग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको
विराटनगर– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दोषी, अपराधी र भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउन नहुने बताएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा आज बिहान पत्रकारसँगको भेटघाटमा उनले निर्दोष र निरअपराधी फस्न नहुने कुरामा जोड दिएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले एमसिसीका विषयमा अनुचित